Twins Poupée: [ REVIEW] THEFACESHOP [ WHITE MUD NOSE PACK ]
[ REVIEW] THEFACESHOP [ WHITE MUD NOSE PACK ]
ENG / မြန်မာ
THEFACESHOP [ WHITE MUD NOSE PACK ]
Review လေးတွေမတင်တာ ကြာ တော့ ဒီတစ်ပတ်တော့ review တင်မယ် ဆိုပြီး ဘယ် product လေးတင် ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ Korea cosmetic brand ဖြစ်တဲ့ THEFACESHOP
[ WHITE MUD NOSE PACK ] လေးအကြောင်းရေးပေးပါမယ်. အဲဒီ product လေးကတော့ ရွှံ့ဖြူ နဲ့ ပြုလုပ်ထား တဲ့ cream pack လေးဖြစ်ပါ တယ်။ ဆားဝက်ခြံ တွေ ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး၊ လျော့နည်းအောင်
I haven't review on our blog on couple weeks ago so i decided to review some product. This week review product name is called THEFACESHOP
[ WHITE MUD NOSE PACK ] .This product is made with white mud and its good for black head reduce also removal pores. Normally i use 'sophie monk' nose pack and biore nose strips. Sometimes i want to try new product.
ဒီ product လေးက cream type ဆိုတော့ ကိုယ်လိုချင်သလို pore ရှိတဲ့ nose and chin တို့ နားမှာ လိမ်းပေးလိုက်ပါ။ 10 ~ 15 minutes လောက်အခြောက်ခံပြီး ခွါလိုက်ပါခ pores များ ပါလာပါမယ် biore nose strips and sophie monk' nose pack လောက်တော့ effective မဖြစ်ဘူး။ သူက နဲနဲ ပဲ pores ထွက်လာတယ်။ pores လေးတွေက ထွက်သွား တော့ nose လေးက နဲနဲ ယားတယ်။ pack ခွါပြီးရင် face cream / face lotion လေးလိမ်း ပေးပါ moisturizing ဖြစ်အောင်လို့ပါ။ ၁ပတ် ကို ၂ ခါ လောက် လုပ် ပေးရင် ပိုကောင်း ပါတယ်။၂ လ လောက်စို ရင် သိသာ လာပါတယ်။ ပုံမှန်တော့ လုပ်ပေးပို့ လိုပါ တယ်။ ဆားဝက်ခြံ တွေရှိလဲ မပူရတော့ဘူးနော် ။
ကောင်း သော နေ့ လေးပါ
This product is base on cream type. You can apply it on nose and chin and leave it 10 ~ 15 mins for dry. Remove it and most of the pores are comes out .. But not effective like biore nose strips and sophie monk' nose pack . It's only comes outafew pores.When the pores are come out my nose is abit itchy . I am applying some face cream and lotion on it for moisturizing.It will be better result when you applying this blackhead removal cream for twiceaweeks .After2months , most of the pores are completely gone.
So, don't worry about the blackhead pores.
Posted by Frances park at Sunday, March 27, 2016